🥇 ▷ Samsung waxay sii wadaa kaftanka iPhone X iyadoo leh cajalado fiidiyow ah oo cusub ✅
Samsung waxay sii wadaa kaftanka iPhone X iyadoo leh cajalado fiidiyow ah oo cusub
Samsung maahan wax ku cusub xayeysiinta fiidiyowga taas oo dhigaysa siishalka xafiiltanka weyn ee mar walba, taasi waa Apple. Gaar ahaan, waxay umuuqataa in iPhone X uu si bilaash ah u siiyay hal abuurka unugyada hal abuurka iyo bir-dhiska suuqgeynta ee reer Kuuriyaanka ah: fiidiyowga kadib, hadda wuxuu galay xaq u leeyahay taariikh, kaas oo ninka caanka ahi uu u muuqday-feejignaan, markan in la arko ee indhaha Samsung waa yaraanta iyo is burinaya ee iPhone 10-ka sano ah.
Waxaan sidoo kale dhowr jeer ku nuuxnuuxsaday, dib u eegista taleefannada casriga ah ee tufaaxa, maqnaanshaha maqnaanshaha a xeedho deg deg ah, maadaama iPhones-ka ugu dambeeyay ay taageerayaan lacag-bixinta deg-degga ah kharashkooduna dhab ahaan ma ahan mid raqiis ah. Samsung waxay sidoo kale u muuqataa inay ogolaatay, iyagoo tilmaamaya sida Apple ugu qasbo isticmaaleyaasha inay gooni u qaataan, iyaga oo bixinaya qarashkooda.
AKHRISO: Google Fuchsia ayaa qaadanaysa: Miyay bedeli doontaa Android iyo Chrome OS?
Isla sidaas ayaa loogu talagalay milkiilaha iPhone-ka oo raba inuu isticmaalo telefishooda gacmeed maqalka codka iyo isla mar ahaantaana dib u buuxiya batariga qalabka: baahida loo qabo a adabtarada dheeri ah in si gaar ah loo iibsado ma door bidaayo kooxda Cupertino-ga ah. Ugu dambeyntiina kamarad iPhone X, oo Apple inta badan ku kalsoontahay, laakiin taas, sida laga soo xigtay DxOMark, waxay jirtay ku dhawaad ​​bilood soo daahay laga bilaabo tartanka. Jawaabta waxaas oo dhan Samsung waa iska cadahay: u beddelo Galaxy S9.